उर्मिला पोखरेल का केही मुक्तकहरूः | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका उर्मिला पोखरेल का केही मुक्तकहरूः – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
आजकल बोल्न पनि मुस्किल भो उसलाई !
खै!किन दिल खोल्न पनि मुस्किल भो उसलाई !!
पहिला सानो भन्दा सानो कुरा बाड्ने मान्छे;
मित्रतामा अमृत घोल्न मुस्किल भो उसलाई !!
सधै पिउनु पर्छ जुस कहिलेकाही दारु भन्नू हुन्छ उहाँ !
तिमी मेरि गृहलक्ष्मी गर्छौं जतन अनि फारु भन्नू हुन्छ उहाँ !!
राधाकृष्ण जस्तो हाम्रो माया कहिल्यै हुने छैन कमि र खोट;
मानिस हुँ गल्ती भए भन प्रिय तुरुन्तै सुधारु भन्नू हुन्छ उहाँ !!
गर्छु पूजा फूल, प्रसाद, अक्षता चढाएर ~ सरस्वती माता
विद्या बुद्धि, विवेक, दिनुस् ज्ञान बढाएर ~ सरस्वती माता
सकरात्मक सोच्न सकौं, बन्न सकौं असल विद्वान मानिस;
अरुलाई पनि ज्ञान बाड्न सकौं पढाएर ~सरस्वती माता ।।
पवित्र प्रेम गुलाव सँग साटिएको देखेँ !
एउटीलाई हैन धेरैलाई बाडिएको देखेँ !!
अति सस्तो भयो आजकल माया पनि;
प्रेमदिवशको केहीदिन पछि टाढिएको देखेँ !!
तिमी गयौं टाढा बिरानो देश माया लगाएर !
तिम्रै सम्झनामा बसेकी छु आँसु बगाएर !!
छिट्टै आउनुस परदेशी बाटो हेर्दै बस्ने छु:
सधै तिम्रै तस्वीर यो मन मुटुमा सजाएर !!
सुन्दर बगैंचामा रंगीचंगी फुलहरू फुल्छन् ।
भमरा र माहुरी भुनभुनाउदै यहीँ डुल्छन् ।।
नि-स्वार्थ हुन्नन् प्रेम फुल सँग यिनका पनि;
ओइले पछि यी फुललाई चटकै भुल्छन् ।।
नेताहरूको चालढाल देखेर दिक्क लाग्यो !
देशको बिग्रदो हाल देखेर दिक्क लाग्यो !!
दिन प्रतिदिन सिमाना मिच्दैछ बैरिले हेपेर;
गणतन्त्रेहरूको जाल देखेर दिक्क लाग्यो !!
कोहि मिजासिलो त कोहि बदमास हुन्छन् ।
कोहि आफ्नो जीवन सँग नै उदास हुन्छ्न् ।।
कोहि जति चिन्ता भए पनि बिन्दास हुन्छन् ।।.
← ए हल्ला !!